We Fight We Win. -- " More than Media ": စီးပွားရေး ပိတ်စို့ မှု နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ( ခိုင်အောင်ကျော်)
စီးပွားရေး ပိတ်စို့ မှု နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ( ခိုင်အောင်ကျော်)
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအပေါ် စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ ထားခြင်းမှာ ဒီမိုကရေစီလမ်းမပေါ်သို့ ရောက်ရှိရေးဖြစ်တယ်
လာမဲ့ ဧပြီလ၂၃-ရက်နေ့ မှာ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ညီလာခံ ခေါ်ယူပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ဘယ်လဂျီယံနိုင်ငံ ဘရက်ဆဲလ်မြို့ အခြေစိုက် အိုင်စီဂျီ ခေါ် နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး သုတေသနနဲ့အကြံပေး အဖွဲ့ မှ ( တနှစ်ခန့် ကြပြီးနောက် ပြောင်းလဲလာသောအခြေအနေများ ) ဆိုပြီး အစီရင်ခံစာ တစောင် ထုတ်ပြန်လာသည် ။
ယင်းအစီရင်ခံစာမှာ စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ ထားခြင်းကို ရုပ်သ်ိမ်းရေးတောင်းဆိုခြင်ြး
ဖစ်သည် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ညီလာခံ တက်ရောက်နေပြီဆိုပြီး စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ ရေးကို ဖယ်ရှားပေးပါဟု တောင်းဆိုမည့် သမတဦးသိန်းစိန်တို့ အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်သည် ဆင်ပြောင်ကြီးသွားရာ လမ်းကြောင်းလို အထင်းသားမြင်နေရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေများမှာ နောက်ကြောင်းပြန်၍ လည့်နိုင်စရာမရှိလောက်အောင် ဖြစ်နေသည်ဟု သုံးသပ်နေကြသူများထဲတွင် ယခုအချိန်၌ အာဆီယံနိုင်ငံနှင့် တရုပ်နိုင်ငံပြီးလျှင် ယခုဥရောပ နိုင်ငံတို့ ဖြစ်နေသည် ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်လည်း သံတမန်အဆင့် ပြန်လည်ထားရှိရန် စဉ်းစားနေပြီး တဆင့်တက်ကာ စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ ခြင်းများကို ရုပ်သိမ်းပေးရန် လေ့လာနေသေးသည်။
ယခုအချိန်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးလိုက်သော်လည်း မလွပ်မြောက်သေးသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ရှိနေသည်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ သူတို့ ၏ အဖွဲ့ ဝင်နှစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးထားသောကြောင့် မလွှတ်ပေးသမျှ ဥက္ကဋ္ဌကြီးက မော်လမြိုင်မြို့ သို့ ပင် မလာလိုတော့ဟု ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုနေသည်။
တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲမှသာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆွေးနွေးမည်ဟု ကြေညာထားသည်ကို တွေ့ ရသည်။ ရှမ်း ၊ ကရင်၊ ကချင်။ ချင်း နှင့် ရခိုင်တို့ မှာ ယခုအချိန်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ပြုလုပ်ထားကြရာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံရေးအရ မဆွေးနွေးကြရသေးပေ ။ သို့ သော် ယခုအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆွေးနွေးထားသော ဤလူမျိုးစုများမှာ အမှန်ပင်လျှင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲသွားကြပြီလားဆိုသည်ကို လေ့လာကြည့်ရန်လိုသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် သူတို့ ဒေသမှာ ယခုအချိန်ထိ ပစ်ခတ်နေတုံး သေနတ်သံတွေ ကြားနေရတုံးဖြစ်သည်။ မတည်ငြိမ်သော သူတို့ ဒေသ၏ အခြေအနေကြောင့် သူတို့ ၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှာ နယ်စပ်ဒေသတလျှောက် ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာ နေထိုင်လျှက်ပင် ရှိနေကြပါသေးသည်။
ယင်းဒုက္ခသည်များကို နိုင်ငံတကာမှ ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းများပင် မပေးကြတော့၍ သူတို့ ခမြာ ယခုအချိန်၌ ရိက္ခာများ ၊ စားသောက်စရာများ ၊ ဆေးဝါးများနှင့် ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မူများမှာ အထူးပင် ကသီလင်တဖြစ်နေကြရကြောင်း ကြားရပါတော့သည်။
နယ်စပ်ဒေသများတွင် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဒုက္ခသည်များအဖြစ် သူတို့ ရောက်နေကြရပါသနည်း ။ ဤအဖြေကို နိုင်ငံတကာအစိုးရများနှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက ဖြေဆိုနိုင်ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်- ၁၉၈၈- ခုနှစ်မှစ၍ ယခုအချိန်ထိ စစ်အစိုးရခေတ်အဆက်ဆက် လူ့ အခွင့်ရေးချိုးဖေါက်မှုများကြောင့် ဒုက္ခသည်များအဖြစ်ရောက်ရှိနေကြကြောင်းကို ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတိုင်း အသိအမှတ်ပြုထားကြပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခြင်းများနှင့် လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှူများ ရှိနေခြင်းကို လွယ်လွယ်နှင့် မျက်စိမှိတ်၍ ရနိုင်ကြမည် မထင် ။
မိဖမဲ့ ခလေးသူငယ်များ၊ မုဆိုးမများတို့ မှာ ယခုအချိန်ထိ သူတို့ မျက်ရည်များကို ဒူးနှင့်သုတ်၍ နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ မှာ တတိယနိုင်ငံများသို့ ပင် သွားလိုကြသူမဟုတ် ။ သူတို့ ၏ ဇါတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေများတွင်သာ နေလိုသည်ဆိုပြီး ပြောဆိုနေကြတုံးဖြစ်သည်။ သို့ သော် သူတို့ ခမြာ ဋ္ဌါနေရပ်ထံ မပြန်နိုင်ကြရရှာ ။ အကြောင်းမှာ အရပ်သားအရေခြုံ စစ်အစိုးရ၏ ကြောထောက်နောက်ခံ အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပကတြိပသနာများကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင် မဖြေရှင်းသေး၍ဖြစ်သည်။ သူတို့ ဖြေရှင်းနေသည်မှာ သူတို့ ၏သက်ဆိုးရှည် ရပ်တန့် စေရေးအတွက်သာ ဖန်တီးနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေခြင်းများကို ကြည့်လျှင် ဟန်ပြလုပ်ကိုင်နေသော အသွင်သဏ္ဍန်များကို မြင်တွေ့ နေရသည်။ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးကို ဆွေးနွေးနေသော်လည်း တိုက်ခိုက်နေခြင်းများမှာ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေရာ ဤအချက်မှာ သံသယများကို ပို၍ရှိနေစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာ နိုင်ငံရေးအရ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆွေးနွေးရာ၌ မဟာဗျူဟာမြောက် မတူညီခြင်းများ ရှိနေသည်။ သမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၊ စီးပွါးရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် လူငယ်များကို စစ်မူထမ်းစေလိုခြင်းဟု နည်းဗျူဟာအခင်းအကျင်းနှင့် ဆောင်ရွက်နေသည်။ ယင်းအချက်ကို ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင် ၊ ချင်း၊ မွန် ၊ ရခိုင် လက်နက်ကိုင်များတို့ က လက်သင့်ခံနိုင်ပါမည်လား ဆိုသော မေးခွန်းကို မေးကြည့်က ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို မည်သို့ မျှ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိသာနိုင်သည် ။ ပြည်နယ်အဆင့်
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးခြင်းများကို ဒေသခံပြည်သူများက အထူးမျှော်လင့်ကြိုဆိုကြသည်ကို နေရာအနှံ့ တွေ့ ရမြင်ရသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ နိုင်ငံတကာရောက်ရှိနေကြသော သူတို့ မှာ သမတဦးသိန်းစိန်အိစုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်များနှင့် ဆွေးနွေးနေခြင်းများကို ထောက်ခံကာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် ရရှိစေလိုကြသည်။ သို့ သော် သူတို့ မျှော်လင့်သလို ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ကြောင်းကို သူတို့ ခမြာ မသိရှိကြသေး ။
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အဆင့်မှာ ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု ဆိုသည်။ နောက်တချက်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းးစုံ ညီလာခံ တခုကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ညီလာခံမှ ပြုလုပ်မည်ဟုလည်း ကြားရသေးသည်။ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ ဆွေးနွေးရုံနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်လာမည်ဟု ကျွန်တော်မထင် ။ ၄င်းပြသနာမှာ -၂၀၀၈-ခုနှစ် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာ နိုင်ငံတော်၌ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများသည် လက်နက်ကိုင်တပ်မတော်၏ ကွပ်ကွဲမူအောက် တခုတည်းမှာသာ ရှိရမည် ဆိုသော ဥပဒေ ရှိနေသည်။ ယင်းဥပဒေသည် အခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်က်ိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစီးများအား ပြည်တွင်းတွင် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ သီးခြားလက်နက်ကိုင်တပ်မတော်များအဖြစ် ခွင့်ပြုနိုင်မည်မဟုတ် ကို ဖွင့်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည် ။
ဆိုရလျှင် သူတို့ တွေကလည်း လက်နက်ကို စွန့် မည် သို့ မဟုတ် ချကြလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ ။ တနည်းအားဖြင့် သူတို့ အား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည်နယ်များအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပြီး သူတို့ ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော်များဖြင့်သာ သူတို့ ၏ ပြည်နယ်၌ အစိုးရအဖြစ် ရပ်တည်ခွင့်ပေးမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရကြတော့မည့် အလားအလာဖြစ်နေသည်။ သူတို့ အား နယ်ခြားစောင့်တပ်များဖွဲ့ ခွင့်ပြုရုံနှင့် သူတို့ ၏ တော်လှန်ရေးသိက္ခာကို ခ၀ါချကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်လာကြမည် မထင်နိုင် ။
မည်သည့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခပြသနာများနှင့် သူတို့ ၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌန်းပိုင်ခွင့် ဆိုသော ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးရေးကို သမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက မဆောင်ရွက်ပေးလေသမျှ မည်သည့်အခါမှ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း ရှိမည်မဟုတ် ။ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာကို မည်သို့ ပင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်ဟု ဟန်ဆောင်လုပ်ပြနေသော်လည်း မကြာခင်ဤပြသနာများက စိန်ခေါ်နေမည်မှာ ဖြစ်သည်။
အရှေ့တောင်အာရှ နယ်နမိတ်ဒေသများတွင် ငြိမ်းချမ်းနေမှသာ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ခန့် အပ်ပေးမည်ဖြစ်ရာ မကြာခင် လက်တွေ့ မကျသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ လက်နက်ကိုင် တပ်မတော်များနှင့် ဖြေရှင်းမရ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးပျက်ပြားကာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်းများကိုလည်း ဖျက်သိမ်းလိုက်ရသည်ဟု ကြေညာလာရမည်ဖြစ်သည်။ မည်သူမပြု မိမိမူသာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုရမည်ပင် ။ ယခုအချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပကတိအမှန်တရာအတိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို မတည်ဆောက်နိုင်ဘဲ ပျက်လွယ်ပြုလွယ် ဖြစ်နေသော နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကြောင့် နိုင်ငံတကာများမှ စီးပွါးရေးပိတ်တို့ ခြင်းများကို မရုပ်သိမ်းသင့် ။ အချိန်အတိုင်းအတာ တခုအထိ စောင့်ကြည့်ပေးရန်လိုပါသေးသည်။ ယင်းအချိ်န်သည် ဒုက္ခသည်များက မိမိနေရပ်ဋ္ဌါနေသို့ဘေးကင်းလုံခြုံကာ ရောက်ရှိရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများက ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးပိုင်ခွင့် ဆိုသော အခြေခံအခွင့်အရေးများကို အပြည့်အ၀ ရှိစေသော အချိန်ကာလ ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ကာကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က စစ်စခမ်းများကို တပ်ရုပ်ပေးပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအား သူတို့နယ်မြေဒေသများတွင် လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့် ပြုရေးဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့် ယင်းသို့ သောအခြေနေများကို ဖန်တီးရယူနိုင်ရန်အတွက် -၂၀၀၈-ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။။ ထို့ ကြောင့် ဥပဒေအတိုင်းဆိုလျှင် မည်သည့်အခါမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွယ်လွယ်နှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရကြတော့မည် မဟုတ်ချေ ။ သို့ ဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာများမှ ဤဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ ခြင်းများကို မရုပ်သိမ်းသေးသင့်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ရင်းစွဲ ရှိနေပါတော့သည်။ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရတော့မည်ဖြစ်၍ စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ခြင်းများကို မပြုလုပ်တော့ပါဟု ဖယ်ရှားပေးလိုက်သည်နှင့် သမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ ထောင်ချောက်ထဲကို ၀င်သွားခြင်းသာဖြစ်ပါသည် ။ မဖြစ်လာသေးသော အနာဂါတ်ကို မျှော်မှန်း၍ အရပ်သားအရေခြုံ စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံ ပြုထားသော သမတဦးသိန်းစိန်၏ လှည့်ကွက်ထဲတွင် နိုင်ငံတကာအစိုးရများမှ ၀င်ပါသွားခြင်းမှာ အရပ်ဆိုးနေသည် ။
သည်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ ထားခြင်းမှာ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး အတွက်သာ ဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်တို့မြင်ခြင်းမှာ ငြင်းမရသောအချက်များကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်ဟု ပြောရပါတော့မည် ။
I agree all what you write except "1988". It must be "1962"
Recently Thein Sein said to the world that the living standard of the country was going down due to "sanction".
When I know what he said....
I belive that Thein Sein also has no brain like Nay Win.
It shows that he still do not know/realize that....
The country is going down deeper and deeper with great acceleration and momentum due to 50 YEARS MISTAKES OF (1) WROUNG POLITICAL SYSTEM (2)WROUNG ECONOMIC SYSTEM set up by JUNTA,NAY WIN and his new generation,all Military Gangsters.
Final Remark: Then Sein still do not know
1) The great value of Democracy
2) How to set up the right political system and international economic sytem under one roof of Democracy for the developement of living standard of citizens.
Thein Sein still stupid!
12 April 2012 at 03:59